हास्यव्यङ्ग्य – मझेरी डट कम
अयोध्या टू ठोरी
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीरामको जन्मभूमि बारेको विषयमा दुई देशीय विवादको सत्य तथ्यबारे आफ्नो कौतुहलता समाधान गर्न हेतु हातमा एकतारे बोकेर ‘नारायण–नारायण’को भक्ति भजन गाउँदै देवर्षि नारद विष्णुलोकमा आइपुग्छन् ।
Read More »अयोध्या टू ठोरी
सुन्दा पनि खितखित हाँसेको थिए म। नहाँसु पनि कसरी ? रमेशलाई रामेशु भनेको सुन्दा। रुपेशलाई रुपेशु भनेको सुन्दा। उमेशलाई उमेशु भनेको सुन्दा। सन्देशलाई सन्देशु भनेको सुन्दा। त्यही बखत मैले एक लखकाटेको थिएँ, “यिनीहरुले सबै नामको पछाडि तलकुरे झुन्ड्याउँदा रहेछन्।”
कहिले देशको कुनाकाप्चातिर पैरो बाढी, अनिकाल, महामारी, भोकमरी सुख्खाका समस्या पर्छन् । कहिले सर्पको बिगबिगी पर्छ, कहिले भने हात्तीहरु आएर जनतालाई आतङ्कित पार्दछन् । कहिले बर्डफ्ल्यू, कहिले इन्सेफलाइटिस, कहिले हैंजा, कहिले जन्डिस, कहिले के त कहिले के । रोग, महामारी आदिको आतङ्क सधैं उठिरहन्छ देशभरि । एउटा न एउटा समस्याले देशका अप्ठेरो पारिरहेको हुन्छ ।… Read More »अासनग्रहण र भासनको आतङ्क
के छ बा हालचाल ? केही लेख्तै हुनुहुन्छ जस्तो छ नि ? मैले सोधें खैरे बूढालाई । अरुले पनि उनलाई खैरे भन्छन् म पनि उनलाई यसै भन्छु । कैलेकाहीं म उनका साथ जिस्कन्छु पनि । उनी बढो रउसे मान्छे छन् । उनलाई पैसाको कमी छैन, उनी पुराना जमिन्दार हुन् । उनको जमिनदारी अझै पनि कायमै… Read More »अखिल नेपाल एकल खैरे दलको योजना
छोरीको दाँत उम्रनु कता हो कता घरमा देउसी भैलो खेल्नेहरुको जस्तै लावालस्कर लाग्न थाल्यो छोरी माग्नेहरुको । मानौ यी सबै कन्यार्थी वरहरू हुन् । एउटा टोली घरबाट निस्कन पाएका छैन, अर्को टोली थपक्क घरमा आइपुग्छ, अर्को निस्कन पाएको छैन, अर्को लगत्तै आइपुग्छ । कस्तो कचेडा हो यो, अनि कस्तो लफडा हो यो ! म आजित हुन लागिसकें । आमाको दूध छुटाएकै छैन उसलाई भर्ना गर्नुको तानातान देखेर विरक्तीन थालिसकी छोरीकी आमा पनि । उसलाई किन्नर गार्डेनमा भर्ना गरिहाल्नु अरे । यिनीहरुका आँखाबाट यो नानीलाई लुकाउनै पर्ने भयो । केही सिप नलागेर लुकाएँ पनि ।